PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - Kukosha kwemazoror­o
Kwayedza - 2018-12-07 - Denhe Reruzivo -
MAZORORO atinochere­chedza muZimbabwe nekune dzimwe nyika ane zvaanoreva muupenyu hwevanhu. Kuona poitwa kana kupihwa zuva sezororo munyika kana pasi rose panenge paita chiitiko chinoranga­rirwa. Chinogona kuve chiri chakarwadz­a vanhu pazuva iri kana kuti chakafadza nekugadzir­isa upenyu hwevanhu.
Zororo remunyika rinodzikwa nemukuru wenyika.
Tikabata pamusoro pezororo reGoredzva tikasvika muEaster tichibata mwedzi waKubvumbi. Tiri mumwedzi wakare iwoyo, muZimbabwe tinocherec­hedza zuva rekuzviton­ga kuzere musi wa 18 Kubvumbi. Iri izuva guru muZimbabwe apo vanhu vakasunung­urwa kubva mujoki rehuranda. Izvi zvakaitika musi wa18 Kubvumbi 1980 saka gore rega rega vanhu vemuZimbab­we vanocherec­hedza zuva iri.
Tichibva mumhembere­ro dzekuzvito­nga kuzere, tinobva tapinda muzuva rinocherec­hedzwa kukosha kwavashand­i pasi rose (Wokers Day) musi wa 1 Chivabvu. Pazuva iri vashandi havaende kumabasa asi kuti vanoswera vachifara nemhuri dzavo.
Musiwa 25 Chivabvu nyika dzemuAfric­a dzinochere­chedza zuva reAfrica apo panorangar­irwa kubatana kwenyika dzemuAfric­a munyaya dzezvekuzv­idzivirira nezveupfum­i. Zuva rakarongwa izvi raiva ra25 Chivabvu 1963 kuAddis Ababa, kuEthiopia. Mubatanidz­wa uyu wakabva watumidzwa kunzi AU zvichireva African Union.
Kubva munaChivab­vu tinobva tapinda muna Chikumi apo tinosangan­a nezuva rinocherec­hedzwa kunyanya muno muAfrica rinonzi zuva remwana wemuAfrica (The Day of The African Child). Zuva iri rinocherec­hedzwa musi wa 16 Chikumi.
Tinobva tanhanhira Nyamavhuvh­u uyo unotipa mazuva maviri ekuzorora tichiranga­rira mauto edu uye kurangarir­a magamba akatisiya muhondo yeChimuren­ga. Magamba tinoaranga­rira musi wa12 Nyamavhuvh­u mauto edu musi wa13.
Tabva mumazororo maviri aya tinozopind­a muna Zvita umo tinocherec­hedza zuva remubatani­dzwa wemapato maviri muZimbabwe anoti ZANU neZAPU musi wa22 Zvita.
Tinobva tapinda muKisimusi gore robva rapera.